ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် ဇာတ်ဝင်တေးများစွာ သီဆိုခဲ့သူ SPB ကိုဗစ်ကြောင့် ကွယ်လွန်
“Forrest Gump” ရုပ်ရှင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ကူညီခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသား Tom Hanks
သံရုံးတွင်သာ မဲရုံဖွင့်မည့်အတွက် ထိုင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားအများစု မဲပေးရန် မသေချာ
မြန်မာနယ်စပ်အနီးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က စစ်အင်အား ထပ်ဖြည့်နေ
မဲရုံတာဝန်ကျ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ လက်ရှိ မိမိနေထိုင်ရာနေရာ၌ တာဝန်ထမ်းရမည်
ရဲရင့်သတ္တိအရှိဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆုရ မြေမြှုပ်မိုင်းရှာဖွေတဲ့ ကြွက်လေး Magawa
လောင်းကစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ မင်းသား ကွမ်ဆန်ဝူး
အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၇ သန်း ကျော်ပြီ
ချဉ်စပ်အရသာ ယိုးဒယား တုံယမ်းခေါက်ဆွဲပြုတ် ချက်စားရအောင်
ပါတီကို ဝန်းရံသူများကို တားမရဟု NLD ဆို
အနောက်အုပ်စုက မြန်မာ NGO များကို ငွေပေး ဆန့်ကျင်ခိုင်းနေကြောင်း တရုတ်မီဒီယာ စွပ်စွဲ
ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေကြား မဲဆွယ်ရေး ခက်နေတဲ့ တအန်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ
တရုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများက ထိုင်ဝမ်လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေ
ထိုင်းကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်များ မြန်မာနိုင်ငံကို စောင့်ကြည့်နေ
KNDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးနှင့် ရွာသား ၄၇ ဦး Quarantine ဝင်ရ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ COVID-19 နေ့စဉ် ကူးစက်မှုနှုန်း စံချိန်တင်မြင့်တက်
COVID-19 ရောဂါဖြင့် ဒုအရာခံဗိုလ်အဆင့် တပ်မတော်သားတဦး သေဆုံး
အင်းစိန်ရွာမ စာသင်တိုက်ရှိ သံဃာနှင့် လူ ၂၇၉ ဦး တွင် ကိုဗစ်ပိုး ထပ်တွေ့
ကိုဗစ် အတည်ပြု အရပ်သား လူနာများကို ကုသမှု စပေးနေပြီဟု တပ်မတော် ပြော
ဂျုံမှုန့် ပြည်သူ၊ မရှိမဖြစ် တဆေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပေါင်မုန့်
ရန်ကုန် ၄၄ မြို့နယ်၌ ကိုယ်စားလှယ်များထား၍ စားနပ်ရိက္ခာ ဖြန့်ဖြူးပေးမည်
တောင်ကိုရီးယား ရသစုံရှိုးအသစ် “We Got Divorced”
Thai Airways ရဲ့ လေယာဉ်စီးပြီး နိုင်ငံအနှံ့ လည်ပတ်ခံစားနိုင်မယ့် ခရီးစဉ်
မူးယစ်ဆေးကိစ္စ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် မင်းသမီး Deepika Padukone ဆင့်ခေါ်ခံရ
“Black Widow” ရုပ်ရှင် ရုံတင်မယ့်ရက်ကို Disney နောက်ဆုတ်
Quarantine Center များတွင် အဆင့်မြင့်ပညာ ကဏ္ဍမှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ကူညီနိုင် ဟုဆို
ကိုဗစ်ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အားလုံး ယာယီပိတ်မည်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရာသက်ပန် ရပ်ဆိုင်းဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားမယ်
အစိုးရအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာအစား ငွေကြေးထောက်ပံရန် လုပ်ငန်းရှင်များတင်ပြ
လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ရသေ့တောင် ဒေသခံ ၃၀၀၀ ကျော်ထွက်ပြေး
My Ooredoo မြန်မာ အက်ပလီကေးရှင်း သုံးစွဲသူများ၏ အချက်အလက် လုံခြုံမှု မရှိဟု ဆို
အောင်ဆန်း တီဘီရောဂါ အထူးကုဆေးရုံသို့ ငွေကျပ် ၁၅ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
လူမှုဖူလုံရေး အကျုံးဝင် အလုပ်သမားများကို လစာ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း အစိုးရ ထောက်ပံ့မည်
အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂ သိန်း ကျော်ပြီ
သတင်းသိပိုင်ခွင့်အတွက် မီဒီယာလုပ်ငန်းကို ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ခွင့်ပြုပေးသင့်
ကိုဗစ်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့နိုင်ကြောင်း Financial Times ခန့်မှန်း
နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရ အရာရှိတဦး၏ ဇနီးအသတ်ခံရမှု ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆက်လက် စုံစမ်းနေ
အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှ သံဃာအချို့ COVID-19 ပိုး ကူးစက်ခံရ
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရရေး အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီသူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ
ကိုဗစ် မတိုင်ခင် တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲ လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘန်နီဖြိုး
၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို စင်္ကာပူနိုင်ငံထက် သာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်
အဆိုတော် Jung Joon Young နဲ့ Choi Jong Hoon တို့ကို ပြစ်ဒဏ် အသီးသီးချမှတ်
USDP ယာဉ်တန်းနှင့် လူငယ်တချို့ ရန်ပွဲ နှစ်ဖက်သက်သေများ စတင် စစ်
ထိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေကို Spa နဲ့ မာဆတ် သွားခွင့် ပြုမည်
သမိုင်းထဲက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်
Stay at Home ကာလ အပြင်ထွက်လျှင် အရေးယူမည်ဆိုသည်မှာ မမှန်ဟု တိုင်းအစိုးရ ထုတ်ပြန်
ကိုဗစ်ကာလ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ တရုတ်နှင့် အမေရိကန် တင်းမာမှုက နေရာယူ
Hotel Mandalay မှ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း ၂၃ ဦး ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရ
အဆိုတော် S.P. Balasubrahmanyam
By မစ်ကီ 28 September 2020
အိန္ဒိယဘာသာစကား ၁၆ မျိုးနဲ့ သီချင်း ၄ သောင်းကျော် သီဆိုခဲ့သူ အဆိုတော် S.P. Balasubrahmanyam ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှာပဲ COVID-19 ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၇၄ နှစ်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ဆယ်စုနှစ်ချီ ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ အနုပညာ သက်တမ်း တလျှောက်လုံးမှာ ဂီတပညာရှင်၊ တေးရေးဆရာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ အသံနောက်ခံပြောကြားသူ တဦးအနေနဲ့ လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ ပရိသတ် သန်းနဲ့ချီရှိတဲ့ အဆိုတော် တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
SPB လို့ ပရိသတ်တွေ သိကြတဲ့ အဆိုတော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးနောက် ချန်နိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံတရုံမှာ တက်ရောက် ကုသမှု ခံယူခဲ့ရတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလမှာ တေးရေးဆရာ Wajid Khan ၊ ဧပြီလမှာ သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Irrfan Khan နဲ့ Rishi Kapoor တို့လည်း ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆိုသလို ကွယ်လွန်ခဲ့ကြတာကြောင့် သူ့ရဲ့ ကွယ်လွန်မှုဟာ အိန္ဒိယရုပ်ရှင် လောကအတွက် အထူးဝမ်းနည်း ကာလတခုကို ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လမှာလည်း မင်းသား Sushant Singh Rajput လည်း ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။
SPB ဟာ အင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် သူဟာ တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်း အဆိုပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်ပြီး ဆုတွေ ရခဲ့ရာကနေ ဂီတလောကထဲ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တုန်းက Telugu စကားပြော ရုပ်ရှင်တကားမှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ လျင်လျင်မြန်မြန် နာမည်ရလာခဲ့ပြီး Tamil, Telugu, Kannada နဲ့ Hindi တို့အပါအဝင် ဘာသာစကား ၄ မျိုးနဲ့ သီဆိုတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆု ၆ ခုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယရဲ့ တတိယမြောက်အမြင့်ဆုံး အရပ်သားဂုဏ်ပြုဆု “Padma Bhushan” ကို ချီးမြှင့်ခံထားရတဲ့ SPB ဟာ ဘောလိဝုဒ်စူပါစတား ရှရွတ်ခန်ရဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ သီချင်းသီဆိုသူအဖြစ် လူသိများပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Maine Pyar Kiya” ရုပ်ရှင်ကနေ အစပြုခဲ့ပြီး အဲ့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပဲ မင်းသား ခန်ဟာ နေ့ချင်းညချင်း နာမည်ရလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ “Saajan” ရုပ်ရှင်၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ “Hum Aapke Hain Koun!” ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်း ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။
SPB ရဲ့ကွယ်လွန်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မင်းသားခန်က “ဆရာ SPB ကွယ်လွန်ခဲ့တာကို ကြားရတဲ့အခါ နှလုံးထိခိုက်ရပါတယ်။ ခင်ဗျားဟာ ဂီတမှာ အငြင်းပွားစရာ မရှိတဲ့ အမွေအနှစ်တွေထဲမှာ ထာဝရ ရှင်သန်နေမှာပါ” လို့ Twitter ကနေ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုတော် SPB ရဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မင်းသားခန်ရဲ့ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင် “Chennai Express” မှာ ပါဝင်သီဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တောင်ပိုင်း Tamil နဲ့ Telugu ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ ဂီတဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီကလည်း SPB ရဲ့ အသံဟာ ဂီတကျူးရင့်တဲ့ အသံဖြစ်တယ်လို့ ချီးကျုးခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ကွယ်လွန်မှုကြောင့် အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကမ္ဘာဟာ တော်တော်လေး ချို့တဲ့ဆင်းရဲခဲ့ရပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Topics: COVID-19, ကွယ်လွန်, အဆိုတော် SPB